OUKITEL K3, dhammaan astaamaheeda farsamo waa la muujiyay | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Noticias, Oukitel
Markii hore barnaamijka 'Androidsis' waxaan ka soo hadalnay terminalka kala duwan ee OUKITEL, soo saaraha Aasiyaanka ah ee magac ka sameysanaya dalkeenna iyada oo ay ugu wacan tahay buuga ay ku qoran tahay ee xalalka xiisaha leh ee sicirka duminta. Waxaan horay u aragnay moodal sida OUKITEL K10000, taleefan leh baytari wacdaro leh. Hadda waa markiisii OUKITEL K3.
Waana taas, ka dib daadad xan ah, soo-saaraha laftiisa ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay iyada oo loo marayo degelkeeda rasmiga ah, dhammaan Faahfaahinta OUKITEL K3, marka lagu daro fiidiyoow uu ku muujinayo dhammaan sirta naqshadeynta taleefankan oo shirkadda Aasiya ay damacsan tahay inay kaga yaabiso suuqa qaabkeeda qalooca iyo qiimaha gaarka ah.
Kuwani waa faa'iidooyinka OUKITEL K3
Waxaan horay u aragnay waxa Naqshadeynta OUKITEL K3 aan tagno si aan u aragno qalabka ku dhejinaya taleefanka soo socda ee soo saaraha Aasiya Si aan u bilaabo waxaan kaaga warrami doonaa shaashadeeda 5.5-inji oo ay sameeyeen guddi IPS ah oo leh xallinta Full HD. Soo saaraha ayaa xaqiijiyay in OUKITEL K3 uu kori doono processor MediaTek MT6750T sideed-xudun oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah keydinta gudaha ah ee aan ku ballaarin karno iyada oo loo marayo kaarka micro SD-ka.
OUKITEL waxay jeceshahay telefoonadooda inay u istaagaan batteriga OUKITEL K3 ma noqon doono mid ka reeban. Sidan oo kale, taleefanka cusub ee weyn ee Aasiya wuxuu yeelan doonaa a 6.000 mAh baytariga taas oo ballanqaadaysa is-maamul-yaraan ugu yaraan laba maalmood ah. Ku sii wadida inta ka hartay astaamaha farsamo ee OUKITEL K3, ka faallo in ay yeelan doonto laba kamaradood oo nidaam ah oo ka kooban 13 iyo 16 lens oo gadaal ah, iyo waliba nidaam kale oo kamarad labalaaban ah oo hortiisa ah oo leh 5 lens megapixels iyo muraayada labaad 16 megapixel. Haa, xagga hore waxay sidoo kale lahaan doontaa nidaam laba kamaradood ah iyo sidoo kale toosh sidaa darteed way ka farxin doontaa dadka jecel is-sawirrada ama sawirrada la iska qaado.
Qodob kale oo xiiso leh ayaa la socda xaqiiqda ah in OUKITEL K3 uu la imaan doono Android Nougat 7.0, marka lagu daro haysashada raadiyaha FM-ka iyo nidaam lacag-bixin deg deg ah oo sii kordhin doona fursadaha batteriga weyn. Dhanka naqshadeynta, sidaad aragtayba, terminaalku wuxuu leeyahay naqshad qalooc ah oo ay sameysay jir lagu ilaaliyo muraayadaha iyo birta, iyo waliba in lagu heli karo labo midab, madow iyo buluug.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OUKITEL K3, dhammaan astaamaheeda farsamo waa la muujiyay
Kaamirooyinka waxqabadka jaban (beddelaadaha Shiinaha)
4 kaararka ciyaaraha ah si aad waqti fiican ugu hesho fasax